Dr. Tint Swe's Writings: Spraying disinfectant in public places to kill the COVID-19 virus ဆေးဖျန်းနည်းအကြောင်း
Spraying disinfectant in public places to kill the COVID-19 virus ဆေးဖျန်းနည်းအကြောင်း
ကနေဒါနိုင်ငံ CTV သတင်းဆောင်းပါးကို အခြေခံတင်ပြပါမယ်။ နိုင်ငံအတော်များများမှာ အများလူထု သွားလာ အသုံးပြုရာနေရာတွေကို ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေးအတွက် ဆေးဖျန်းပေးနေကြပါတယ်။ ဘာဆေးလဲ။ Sodium hypochlorite ခေါ် Bleach ဘလိခ်ျ ခေါ် ချွတ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
သတိထားစရာတွေ မရှိတယ်။ မျက်နှာပြင်တွေအကုန် ထိရောက်အောင်ဖျန်းရတာ ခက်တယ်။ ဆေးဖျန်းသူတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိတယ်။ PPE ဝတ်စုံ လိုတယ်။ လူတွေအတွက်လည်း အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ထိမိတဲ့အရေပြားကို လောင်စေနိုင်တယ်။ ရှူမိသူတွေ အသက်ရှူလမ်းရောဂါရစေနိုင်တယ်။
၂၀၁၉ ခု အောက်တိုဘာလက လေ့လာမှုတခုအရ အဲဒီဆေးအမြဲလိုလိုသုံးပြီး သန့်ရှင်းပေးရတဲ့ သူနာပြုဆရာမတွေမှာ
COPD ခေါ် နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်းပိတ်ရောဂါရကြတာတွေ့ရှိရတယ်။ ၂၀၁၇ ခုလေ့လာမှုမှာ ဂျာမန်လူမျိုးတွေမှာ ပန်းနာ ပိုဖြစ်စေတာတွေ့ရှိရတယ်။
တရုပ်ပြည်မှာ အဲဒီနည်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးခဲ့တယ်။ အခု တရုပ်ဆရာဝန်တွေက ထိရောက်မှုကို မေးခွန်း ထုတ်နေကြရတယ်။ မတ်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ CCTV အင်တာဗျူးမှာ တရုပ် CDC ခေါ် ရောဂါများထိန်ချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာန သုတေသနမှူး Zhang Liubo က အများအပြားအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဂဟစနစ်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်။ နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့တယ်။ ခဏခဏထပ်မဖျန်းသင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘလိခ်ျကနေ အဲလိုနေရာတွေမှာ ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို သေ မသေကိုလည်း အခိုင်အမာ မပြောနိုင်သေးပါ။
အိမ်တွင်း ရုံးတွင်း အလုပ်နေရာတွေမှာတော့ ဘလိခ်ျကို သုံးသင့်တယ်။ မကြာခဏသုံးလည်း ရတယ်။
WHO အဆိုအရ ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လေကတဆင့် မကူးပါ။ ပိုးသေဆေးတွေ လေထဲဖျန်းရန် မလိုပါ။ Sanitizer လက်ဆေးဆေးရည်ကို လေထဲဖျန်းတာ အကျိုးမရှိပါ။
CDC အဆိုအရ အခုထိ လူကနေ လူကိုသာကူးစက်တာတွေ့ရပြီး မျက်နှာပြင်တွေကနေတဆင့် ကူးစက်တာ မတွေ့ရသေးပါ။
ဘလိခ်ျက ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို အိမ်တွင်း ရုံးတွင်း အလုပ်နေရာတွေမှာ သေစေတာမှန်ပေမဲ့ တခြားကာကွယ်နည်းတွေ မလုပ်ပဲနေလို့ မရပါ။ လက်မကြာခဏဆေးခြင်း၊ လူအများရှိရာ မသွားလာခြင်း။
အဲတာတွေကြောင့် ဆေးဖျန်းတာ မလုပ်နဲ့လို့တော့ မဆိုပါ။ လိုတာထက် မပိုသင့်ပါ။ သတိထားပါ။
Bleach ဆိုတာဘာလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2020/03/bleach.html
Hand Sanitizer လက်ဆေးရည် https://doctortintswe.blogspot.com/2020/03/hand-sanitizer.html
Routine Cleaning and Disinfection of Households ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေး https://doctortintswe.blogspot.com/2020/03/routine-cleaning-and-disinfection-of.html
Wuhan Coronavirus ဝူဟန် ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အသံထွက်နည်း
Coronavirus Update ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အပ်ဒိတ်
Coronavirus Vaccine ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ကြာ...
Public Library အများသုံးစာကြည့်တိုက်
မင်္ဂလသုတ်ပျို့ နှင့် အဖြေ
Lime and Bleach ထုံးဖြူးမလား ချွတ်ဆေးဖျန်းမလား
Remdesivir ဗိုင်းရပ်စ်ဆေး ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအတ...
Peaceful Burma ငြိမ်းချမ်းသာယာသော တိုင်းပြည်
Symptoms of Coronavirus ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါလက္ခဏ...
Mango Skin Allergy သရက်သီးခွံ အလာဂျီ
ရွှေ နှင့် ပုလဲ
သင်္ဘော နှင့် ပိန္နဲ
Homemade Masks လက်ဖြစ် နှာခေါင်းစည်း
Buddha Day ကဆုန်လပြည့်နေ့
Coronavirus: Mike Pence flouts rule on masks at ho...
ခေတ်တကန့် လူတယောက် သူ့အမြင်
History Water Filter သမိုင်းစစ် စစ်ယူရမယ်
Adopted Words မွေးစားစာလုံးများ
ရှုပ် နှင့် ရှုတ်
Important Hormones အရေးကြီးဟော်မုန်းများ
Covid-19 မြန်မာပြည်ဖြစ် ကိုဗစ်
Chayote (Chaico) ဂေါ်ရခါးသီး
History နှစ်တထောင်ကို စာလုံးတထောင်ဖြင့်ရေးခြင်း
Myth Facts Fiction ဘဝအကြောင်းဆိုတာတွေရယ်
Butterfly Bean ပဲလိပ်ပြာ
Coronavirus Comparisons ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ မတူ...
Writings စကားအရာ အင်္ဂါဆယ်ပါး
IUD ထုတ်လို့ ရေးရတယ်
Return Home အပြန်ခရီး
Moth Era ပိုးခေတ်
Spraying disinfectant in public places to kill the...
RIP ကပ်သင့်ခြင်း အမျိုးမျိုးရှိသည်
ဗံဒါ ဗာဒမ် နှင့် မာလကာ
PPE ယူနီဖေါင်း ရောဂါများ
ရဲဘော် ငပိရည်နဲ့ အတို့စားမလား
ကရိုနာ နှင့် တမာရွက်
Coronavirus Disease Cases overview မောင်တို့ရွာမှာ...
Lysol လိုင်ဇော သို့မဟုတ် အမေရိကန်လုပ် တမာရွက်ပြုတ်ရည်
Coronavirus in USA ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ နှင့် ယူ...
Profession ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေမှန်းတော့ မသိ
Fetal Measurements ဗိုက်ထဲကကလေး အရွယ်အစား
အိန္ဒြာနဲ့ အိနြေ္ဒလို့ မရှိပါ
Hygiene and Tropical medicine အပူပိုင်းဒေသ ဆေးပညာ
Heart rate နှလုံးခုန်နှုန်း
SARS-Covid-2 and Temperature, Humidity and Sunligh...
Loka Niti ခေတ်သစ်လောကနီတိ
Green Plants စိမ်းစိုတဲ့ညနေ
Foreigners နိုင်ငံခြားသားတွေ အတော်ဂွကျတယ်
Plasma Donations from Recovered COVID-19 Patients ...
ဒါး ကနေ ဘာကြောင့် ဓား ဖြစ်လာသလဲ သမိုင်း